Hawl -wadeenkii Duulimaadka Hawada ee Hawada ayaa la siidaayay ka dib markii uu Rakaab Garaacay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawl -wadeenkii Duulimaadka Hawada ee Hawada ayaa la siidaayay ka dib markii uu Rakaab Garaacay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Jabinta Hawaii • HITA • Warshadaha Warshadaha • News • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Wararka Mareykanka
Rakaabkii Hawada ee Hawada oo la xiray - Lahaanshaha sawirka Bill Paris
7:30 subaxnimo ee maanta, duullimaadkii Hawaiian Airlines ee HA152 ayaa dib loogu weeciyay gegida kadib markii qof rakaab ah oo aan xasiloonayn uu feeray mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda wax yar ka dib markii ay duushay.
Duulimaadka ayaa ka amba baxay garoonka caalamiga ah ee Daniel K. Inouye kuna sii jeeday Hilo oo ku taal Jasiiradda Weyn.
Qof ka mid ah rakaabka diyaaradda ayaa sheegay in shilku ka dhacay meel u dhow afaafka hore ee diyaaradda.
Afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha ee Hawaii ayaa yiri, “qof rakaab ah ayaa ku dhacay mid ka mid ah shaqaalaheena duulimaadka, oo marayay waddada, shil aan sabab lahayn.”
Duulimaadka ayaa ka amba baxay garoonka caalamiga ah ee Daniel K. Inouye kuna sii jeeday Hilo oo ku taal Jasiiradda Weyn. Sida laga soo xigtay afhayeenka Hawaiian Airlines Alex Da Silva, “qof rakaab ah ayaa weerar ku qaaday mid ka mid ah shaqaalaheena duulimaadka, oo marayay waddada, shil aan laga fiirsan.”
Markii ay soo dageen, ku-xigeennada Sheriff-ka Gobolka ayaa raacay diyaaradda halkaas oo lagu xiray 32-jir rakaab ah oo rag ah oo lagu eedeeyay weerar heerka saddexaad ah oo lagu qaaday shaqaalihii ragga ahaa oo laga saaray diyaaradda.
Rakaabkii saarnaa diyaaradda, Bill Paris, ayaa sheegay in shilku ka dhacay meel u dhow afaafka hore ee diyaaradda.
Af hayeenka Hawada Da Silva ayaa yiri, "Shaqaalahayaga duulimaadka ayaa la qiimeeyay oo laga sii daayay shaqada si loo nasto."
Senator -ka Mareykanka ee Hawaii Brian Schatz, oo ah Guddoomiyaha Guddi -hoosaadka Ku -meel -gaarka ah ee Senate -ka ee Gaadiidka, ayaa yiri: “Weerarkan waa mid la canaanan karo. Gacan ku -dhiiglaha waa in lala xisaabtamaa oo sharciga lala tiigsadaa. Waa inaan loo dulqaadan eberka noocaan oo kale ah.
Maamulka Duulista Hawada (FAA) ayaa baari doona dhacdada.
Nasiib darro, Wax Cusub ma aha
Sida laga soo xigtay FAA, duulista inta lagu guda jiro maalmahan COVID-19 waxay gaar ahaan walaac ku tahay xubnaha shaqaalaha iyo rakaabka, gaar ahaan xirashada maaskaro. Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay, ay jireen 4,385 warbixinno rakaab oo aan nidaam lahayn kuwaas oo 3,199 ay ahaayeen dhacdooyin la xiriira maaskaro.
Mid kale maqaalka maanta eturbonews, waxaa la soo sheegay in Federal Air Marshals ay barayso kalkaaliyayaasha duulimaadka sidii loola tacaali lahaa halista sii kordheysa ee rakaabka ee noqda dagaalyahanno iyo rabshado, badiyaa ka soo horjeeda xeerarka maaskaro wajiga.
Maamulka Amniga Gaadiidka (TSA) waxay dejisay shuruud weji dabool shaqsiyaadka ku baahsan dhammaan shabakadaha gaadiidka ee ku baahsan Mareykanka oo dhan bishii Febraayo ee sannadkan, oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, diyaaradaha ganacsiga ee dul saaran, basaska waddada ka baxsan, iyo nidaamka baska iyo tareenka.
Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ayaa dhowaan ku dhawaaqay in socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay oo leh tallaalka FDA oggolaatay ay si ammaan ah ugu safri karaan gudaha Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, tilmaamaha CDC ayaa wali u baahan shaqsiyaadka inay xirtaan maaskaro wejiga, masaafada bulshada, iyo inay gacmahooda dhaqaan ama isticmaalaan gacmo nadiifiye.